Ciidamada Booliska Baledweyne oo Nabaddoonno Xabsiga dhigay, kaddib markii ay… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ciidamada Booliska Baledweyne oo Nabaddoonno Xabsiga dhigay, kaddib markii ay…
Ciidamada Booliska Baledweyne oo Nabaddoonno Xabsiga dhigay, kaddib markii ay…
Baledweyne (Halqaran.com) – Ciidamada Booliska ee Magaalada Baledweyne ayaa xabsiga u taxaabay Odayaal Dhaqameedyo, ka dib markii ay ka horyimaadeen inay gacanta ku soo dhigaan askari dil ku eedeysan.
Taliska Booliska Baledweyne ayaa horey Odayaasha Dhaqanka uga dalbaday inay soo qabtaan askari dil loo haysto oo ka baxsaday gacanta sharciga, kuna heyb ah odayaasha lagu xir xiray Baledweyne.
Odayaasha Dhaqanka ayaa waxay ku cudurdaarteen inaanay gacanta ku soo dhigi karin ninkaasi, cidda laga doonaayo inay soo qabataana ay tahay dowladda, maadaama sida ay sheegeen aanay iyagu dowlad ahayn.
Askarigan ayaa ka mid ahaa tiro maxaabiis ahayd oo 14-kii bishii hore ee November ka baxsatay Xabsiga Dhexe ee Baledweyne, kuwaa oo dhammaantood dil sugayaal ahaa.
Nabadoon Cabdiwahaab Maxamed oo ka mid ah Waxgaradka Gobolka Hiiraan, sidoo kalena ay ehel yihiin Odayaasha Dhaqanka ee lagu xiray Magaalada Baledweyne ayaa sheegay inaanay iyagu soo qaban karin askariga baxsaday oo ka tirsanaa Ciidamada Booliska.
“Nin dowladda u xirnaa oo xukunaa oo maxbuus ahaa ayaa dowladda ka fakaday, marka ninkaas ayaa rabnaa inaad keentiin oo soo qabateen ayay dhaheen. Haddee anagu waxaan dhahnay dowlad manihin, dowladda uun baa wax soo qabata, anaga shacabaa iska nahay, nin dowladdii ka fakaday-na sooma qaban karno.” Ayuu yiri Nabadoon Cabdiwahaab Maxamed.
Nabadoon Cabdiwahaab Maxamed oo la hadlay Idaacadda Kulmiye ee Magaalada Muqdisho ayaa wuxuu xaqiijiyay in illaa toddobo qof, ay Ciidamada Booliska u xireen baxsashada askarigaasi.
Nabadoon Cabdiwahaab Maxamed ayaa xusay in Taliska Booliska uu ugu hanjabay haddii ay ninkaasi soo qaban inay sii wadi doonaan beegsiga ay ku hayaan Odayaasha Dhaqanka, sida uu yiri. Dadka hadda xiran waxaa ku jira buu yiri Nabadoonkii guud ee beesha.
Taliyaha Xabsiga Dhexe ee Baledweyne, Maxamed Xasan Guure ayaa saacado ka dib baxsashada maxaabiista, waxaa uu beeniyay inay maxaabiis ka baxsatay xabsiga uu maamulo.
Ugu dambeyn, taliska Booliska Baledweyne ayaan weli ka hadlin tallaabada ay xabsiga ku dhigeen Odayaasha Dhaqanka, ee uu ku beesha yahay askariga ka baxsaday gacanta sharciga.
Nabaddoono xabsiga Baledweyne la dhigay